LiFePO4 ဘက်ထရီစက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူ - China LiFePO4 ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများ
24V 200AH LiFePO4 လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီစွမ်းအင်ချောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အတွက်
ခေါင်းစဉ်: 24V 200AH LiFePO4 လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီစွမ်းအင်မသန်စွမ်းသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အတွက်မော်ဒယ်နံပါတ် .: SSL-IFR8S2PE1000 နိဒါန်း ၂၄V 200AH LiFePO4 လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ ဓာတ်အားလိုင်းအပြင်အဆင်၊ အရန်ပါဝါ၊ အိမ်သူအိမ်သားသိုလှောင်မှု powerwall, သံမျှော်စင်, အဏ္ဏဝါ
လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စက်ဘီးအတွက် 60v 40Ah လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် lifepo4 ဘက်ထရီ
ခေါင်းစဉ်: လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စက်ဘီးနှင့်ဆိုင်သောအီးဆိုင်ကယ်အတွက် 60v 40Ah လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် lifepo4 ဘက်ထရီမော်ဒယ်နံပါတ် .: SSL-IFR20S20PE200 နိဒါန်း: 60V 40AH လီယွန်လီနီယမ်လီတာအိုင်းယွန်းဘက်ထရီသည်လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ်၊ လျှပ်စစ်ဂေါက်လှည်း၊ အီဘီးတပ်ကုလားထိုင် , လျှပ်စစ်လွှ, မြက်ရိတ်စက်, Rem
48v 100Ah LiFePO4 ဘက္ထရီသည်ဆက်သွယ်ရေးဘူတာအတွက် backup power UPS station
ခေါင်းစဉ်: 48v 100Ah LiFePO4 ဘက္ထရီအရန်အားပါဝါယူအက်စ်ဘူတာရုံအတွက်တယ်လီကွန်းဘူတာရုံအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်အမှတ် SSL-IFR15S1PE1000 နိဒါန်း - ၄၈V ၁၀၀ လီဖိုPO4လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် LPP ဘက်ထရီသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပြင်သိုလှောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်မှု powerwall, သံမျှော်စင်, အဏ္ဏဝါ y
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် 12V 200AH liFePO4 ဘက်ထရီ
ခေါင်းစဉ်: နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် 12V 200AH LiFePO4 ဘက်ထရီပုံစံမော်ဒယ်နံပါတ် .: SSL-IFR4S2PE1000 နိဒါန်း: ၁၂V 200AH LiFePO4 လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသိုလှောင်ခြင်း၊ အရန်သိုလှောင်ခြင်းအတွက် LFP ဘက်ထရီ၊ နေအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ သံမျှော်စင်၊ အဏ္ဏဝါရွက်လှေ၊ နေစွမ်းအင်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
20ah လီသီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ, လီသီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီဆဲလ်များ, ပါဝါလီသီယမ်ဘက်ထရီ, ပါဝါဘက်ထရီ Pack ကို, ပါဝါ Lithium ဘက်ထရီ, 3.6v လီသီယမ် -Ion ဘက်ထရီ,